Hayyuu Duree ODA: 'Wanti adda nu godhu Paartii Dhaloota Qubee ta'uudha' - BBC News Afaan Oromoo
Hayyuu Duree ODA: 'Wanti adda nu godhu Paartii Dhaloota Qubee ta'uudha'
Madda suuraa, ODA
Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeessuuf ji'ootni wayita hafanitti dhaabni siyaasaa Oromiyaa keessatti ''Dhaloota Qubeerratti' 'xiyyeeeffatee socho'u moggaasa Gamtaa Dimkooraatawaa Oromoo ykn ODA jedhuun hundaa'eera.
Hayyuu Duree dhaaba haaraa kanaa ta'anii kan filataman kaadhimamaan PhD mummee Constitutional Law Yunivarsiitii Finifnnee kan ta'an barsiisaa Sulxaan Qaasim.
Gamtaa Dimkooraatawaa Oromoo(Oromo Dimocratic Aliance) ALI Onkololessa 23 bara 2012 Oromoota dhimmi sabaa isaan yaachisu harki caalaan isaanii hayyuuwwan Yunivarsiitilee Oromiyaa keessatti barsiisan ta'uu Obbo Sulxaan BBC'tti himaniiru.
''Ogeeyyiin kun siyaasa biyyattii qorachaa turre Siyaasa Oromoo keessatti qaawwaafi rakkoo jiru furuuf dhaaba siyaasaa haaraa hundeessuu waan feesiseef hundessinee'' jedhan.
Paaritiin kun sagantaa siyaasaafi imaammatoota biyyaaf bu'aa buusu jedhan qopheesse filannoo bara kana ni adeemsifama jedhamee karoorfame irratti himaachuuf hojjechaa akka jirus BBC'tti himan.
Kanaafis ''Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaatti dhaaba Siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'u ta'ee beekamtii argachuuf ji'a lama dura iyyata galfanneerra'' jedhan.
''Wajira banannee, ummata waliin walarguu akka dandeenyu, deeggarsi barbaachisu akka nuuf godhamus xalayaa deeggarsaa Boordii Filannoo irraa arganneerra.''
Paartii ODA paartilee Oromoo kana dura turan irraa maaltu adda godha?
Oromiyaa keessatti dhaabbileen siyaasaa dantaa Oromoof qabsaa'uuf hundaa'an hedduun bakka jiranitti waan addaa dagatameef xiyyeeffannoo kennuun ijaaramuu keenyatu adda nu godha jedhu Obbo Sulxaan.
Kuniis qabsoo jijjiirama amma biyyattii keessatti dhufeef kan aarsaa guddaa baase, dargaggoon sadarkaa barbaachisutti hirmaachaa dhabuu isaatii jedhu.
''Paartii Dhaloota Qubee jennee of waamna, ummatnis haala kanaan akka nu hubatu barbaanna'' kan jedhan Obbo Sulxaan, ''dhaloonni bilisaa, dhaloonni haaraan kun ilaalchaafi kallattii haaraan siyaasa Oromiyaa fi biyyaa sochoosuu qabna yaada jedhuu qabna'' jedhan.
Adeemsi siyaasaa biyyattii kanaa shiraa, walshakkii fi waan adda addaan xaxamee bu'aa barbaadamu fidaa waan hin jirreef dhalootni haaraan kana keessaa haala itti bahuu dandeenyu akeeka abdi jedhu qabnas jechuun dubbatu.
Dabalataan ammoo 'qaamni hawaasaa, siyaasaa gidduugalaa irraa moggeefame jira, keessumattuu horsiisee bulaan, ijaaramee rakkoon isaa furamuufi qaba'' ilaalcha jedhu akka qaban nutti himan.
Siyaasni biyyaa gidduugala biyyaarratti kan daangeffameedha, gara moggaa biyyaatti bahee hunda hammataa ta'uu qaba, sanirratti hojjennaa jedhu hayyuu dureen dhaaba ODA obbo Sulxaan Qaasiim.
Bikka namni dhaabbileen siyaasaa Oromoo jiranuu walitti osoo makamanii wayya jedhutti haraawa ijaaranii bahuun filannoo uummataa hedduummeessuu isaaniif sababa kaahaniiru.
''Jalqaba irratti gurmaa'uun mirga heeraatii'' jedhan. Itti aansuunis ''paartileen hanga ammaa jiran iddoon isaan hin ilaaliin jiraa'' jedhan.
''Namoota Oromoof qabsaa'aa turan, wareegama kaffalaniif kabaja ni qabnaafi Sadarkaa amma irra jiruun garuu ilaalcha haaraa Oromoo guutuu tokkomsee demutu barbaachisa, kuniis dhaloota haaraa kan keessaa burquu qaba yaada jedhu qabna'' jedhaniiru.
Beekamtiin Boordii filannoo harka isaanii erga gahee booda Filannoo bara kana gaggeefamuuf Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti kaadhimamtoota gahumsa qaban dhiyeessuun aakka hirmaatan himan.
Bu'uurri deeggarsaa isaaniis uummata Oromoo guutuu akka ta'u fi harki caalaan dhaloota haaraa(dargaggeessa) ta'u dabalanii himaniiru.
Waltajjiiwwan garaagaraa gochaa akka turan himanii, galmeen Boordii Filannoo erga xumuramee booda sagantaa siyaasaa isaanii beeksisuufi waajiralee godinaalee hundatti banachuuf akka jiraniis himan.
Dhaabni haaran kun hirmaannaa siyaasaa dubartootaa harka walakkaan gahuuf kan karoorfatu akka ta'eefi ammatti dhibbeentaa 30 irra akka jiru nutti himaniiru.
Siyaasa Itoophiyaa: ABO dabalatee dhaabbileen siyaasaa kudhan walta'an
UN addunyaarratti namoonni miliyoona 82 buqqa'an jedhe